Malunga nathi-Kangton Industry Co., Ltd.
Wamkelekile kwiKangton iwebhusayithi esemthethweni yokuthumela ngaphandle izixhobo zamandla, izixhobo zegadi kunye nezixhobo zokhathalelo lwemoto- le yeyona indibaniselwano yexabiso kunye nomgangatho.
I-Kangton liqela elizinikeleyo nelinomdla, elizinze eShanghai ukusukela ngo-2004. Sinomxube omkhulu wolwazi kunye nezinto ezintsha, amava kunye nokuzinikela, okusebenzayo kunye 'netekhi' kwiqela leKangton. Konke oku kuyadibana ukuze kunikezelwe elona nqanaba liphezulu lenkonzo esinokuthi silinikeze abathengi bethu abakhulayo.
Siya kubonelela abathengi kulo lonke Mid-East, Afrika, Australia kunye Asia iimveliso ezikumgangatho ophezulu. Sinezinto ezininzi zezixhobo kunye nezixhobo kunye nokubonelela ngolawulo olubanzi lweemveliso zethu. Apha uya kufumana uluhlu olupheleleyo lwezixhobo zeenkwenkwezi: i-angle grinder, izixhobo ezingenazintambo, isitshixo sempembelelo, isarha yomthi, i-petroli yokusika ibrashi, isarha yetyathanga, inkungu yenkungu, isher yokucinezelwa okuphezulu, kunye netshaja yebhetri yemoto kunye nezinye iimveliso ezisetyenziswayo.
NGOBA KHETHA US
Sineminyaka emininzi yamava ekuthumeleni izixhobo, ukuqonda iimfuno zeemarike zakho
Sibonelela ngolawulo lomgangatho olubanzi lweemveliso zethu ezivela kuzo zonke izinto ezincedisayo, umgca wemveliso kunye nokuvavanywa komatshini wonke ngaphambi kokuthunyelwa.
Uluhlu olupheleleyo lwezixhobo zamandla, izixhobo zegadi kunye nezixhobo zokhathalelo lwemoto, uya kuyifumana ubuyikhangela
Iinyanga ezili-12 iwaranti kuzo zonke izixhobo zethu, kunye nenkonzo ye-DDP / DDU yokuhambisa ngenqanawa, yenza ishishini lakho libe lula ngakumbi
Wamkelekile ukuba usityelele kwaye sijonge phambili ekusebenzeni nawe.